पूर्वप्रधानन्याधीश सिन्हालाई ११ वर्ष जेल सजायँ, के हो अभियोग ? — Imandarmedia.com
पूर्वप्रधानन्याधीश सिन्हालाई ११ वर्ष जेल सजायँ, के हो अभियोग ?
काठमाडौं। बंगलादेशका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा ११ वर्षको जेल सजायँ सुनाइएको छ। ७० वर्षीय पूर्वप्रधानन्यायाधीश सिन्हालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा सात वर्ष र विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दामा चार वर्ष गरी जम्मा ११ वर्षको जेल सजायँ सुनाइएको हो।
सिन्हाले तत्कालीन फार्मर्स बैंक हाल पद्म बैंक बाट ४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर ऋण लिएका थिए। त्यसपछि उनले त्यो रकम नगद, चेक र पे–अर्डरमार्फत् दोस्रो खातामा सारेको आरोप छ ।
यसो गर्नु बंगलादेशको भ्रष्टाचार रोकथामसम्बन्धी कानुन अनुसार दण्डनीय मानिन्छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी यही प्रकरणमा मुछिएका १० जनामध्ये मोहम्मद शाहजाँ र निरन्जन चन्द्र साहालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सिन्हासहित अन्यलाई भने अलग–अलग जरिवाना र जेल सजायँको फैसला अदालतले गरेको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि सिन्हाले चार वर्ष अघि विदेश भ्रमणको क्रममा प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
यद्यपि उनले बंगलादेशको ‘अलोकतान्त्रिक’ र ‘निरंकुश’ शासनको विरोध गरेकाले आफूलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको दाबी गर्दै आएका छन्। सिन्हा हाल अमेरिकामा बस्दै आएका छन्।
उनको अनुपस्थितिमा अदालतले जेल सजायँ सुनाएको हो। सिन्हा बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दु समुदायबाट पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनी बंगलादेशका २१ औं प्रधानन्यायाधीश हुन्।
यो पनि, सर्वोच्चमा झडप दर्जनौं वकिल पक्राउ: कानुन व्यवसायीको जुलुसमा झडप भएको छ। केही पक्राउ परेका छन्। उनीहरु सर्वोच्च अदालत अगाडिको सडकमा छन्।
त्यहाँ आन्दोलनरत पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीहरुबीच केहीबेर धकेलाधकेल भएपछि झडप भएको हो। कानुन व्यवसायीहरु बाहिरी सडक हुँदै सर्वोच्च अदालत तर्फ अघि बढेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने भित्री गेटहरु सबै बन्द भएपछि उनीहरुले बाहिरी गेटतर्फ अगाडि बढेका हुन्। उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे भन्दै नारा लगाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतभित्र प्रवेश गर्ने गेटमा पनि ताला लगाएको देखिएको छ। यो गेट प्रधानन्यायाधीश भित्रिंदा र बाहिरिंदा मात्र खोल्ने गरिन्थ्यो । अरु बेलामा भने बन्द नै हुने गर्दछ।
सेवाग्राही र अन्य व्यक्ति प्रवेश गर्ने सडकतर्फको गेटमा दंगा नियन्त्रण गर्ने उपकरणसहित सुरक्षाकर्मीहरु परिचालित छन् । भित्री ढोका बन्द भएकाले अब आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुले सिंहदरबार पश्चिम गेट–माइतीघर खण्डको सडक प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिनुपर्ने छ।